Saadaasha Khabiirka BBC Sports Ee Lawrenson Ee ku aadan Kulamada 32aad, | SOMALI NEWS U Adeegaha Bulshada
Home / ARRIMAHA BULSHADA / Saadaasha Khabiirka BBC Sports Ee Lawrenson Ee ku aadan Kulamada 32aad,
Liverpool ayaa mar kale halgan u geli doonta inay sii xajisato hoggaanka Premier League marka ay Axadda iska hor yimaaddaan Tottenham oo ay ku ballansan yihiin kulanka dhimashada ee Axadda.
Liverpool oo laba dhibcood ka sarraysa Manchester City oo kusoo xigta laakiin ay ciyaar baaqi u tahay, ayaa waxay garoonkeeda Anfield ku qaabili doontaa Spurs oo kaalinta saddexaad inay sii xajisato halgan ugu jirta, waana sababta kulankan loogu magacaabay ‘Ciyaarta Toddobaadka’.
Manchester City oo labaad fadhida ayaa waxay xilli hore oo maanta ah marti u noqonaysaa Fulham oo dhibaato weyn ku jirta, isla markaana haddaba sii og inay dib ugu laabanayso heerka labaad ee ay xili ciyaareedkii hore kasoo baxday, halka Manchester United oo Khamiistii tababare rasmi ah ka dhigto Ole Gunnar Solskjaer ay qaabilayso Watford.
Arsenal oo kaalinta afraad fadhida ayaa kulankeeda toddobaadka waxay Isniinta la ciyaari doontaa Newcastle xilli ay kasii warqabto natiijooyinka kooxihii kale, balse Chelsea ayaa Axadda u tegi doonta Cardiff City oo ah kooxda saddexaad ee ugu hoosaysa miiska kala-sarraynta horyaalka Premier League.
Haddaba Khabiirka BBC Sports ee Mark Lawrenson ayaa sidii caadada ahayd saadaaliyey natiijooyinka kulamadan, waxaana uu guul ugu bushaareeyey Liverpool oo uu u sheegay inay kusii negaan doonaan hoggaanka horyaalka oo ay ka takhalusi doonaan Tottenham.
Previous: Shir ay yeelan lahayeen Madaxda Maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe oo fashilmay,
Next: Dhageyso, Madaxweyne Deni Oo balan qaaday in Ciidanka Puntland….